Natiijada imtixaanada ardayda fasalka sagaalaad - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Natiijada imtixaanada ardayda fasalka sagaalaad. Foto: Roald Berit/TT
Natiijada imtixaanada ardayda fasalka sagaalaad
La daabacay tisdag 25 november 2014 kl 10.57
Maanta waxa ay haayadda iskuuladu soo bandhigtay natiijada imtixaanadii fasalka sagaalaad ee gu’ga. Dhammaan ardayda waxa imtixaan lagaga qaaday maadooyinka kala ah, af-iswiidhishka, af-ingiriisiga, xisaabta, maaddada diinta, taariikhda iyo waliba maaddada cilmiga bulshada.
Sidoo kale waxaa imtixaan lagaga qaaday maadooyinka kimistariga, fiisigiska iyo bayoolajiga. Badi ardaydu si fiican ayay ugu guulaysteen maaddada ingiriisiga. Waxaanay maaddadaasi noqotay mid ay gabdhaha iyo wiilashuba ku derajo fiican ka gaadhaan. Derajada loo yaqaano Godkänt waxa helay 97%, halka 18% ardayda ka mid ahi heleen derajada ugu sarraysa ee A loo yaqaano.
Derajadii ugu hoosaysay imtixaanadan waxa helay ardayda dhigata luuqadda iswiidhishka ee dadka ajaanibka ah loogu talogalay ( svenska som andraspråk), waxaanay ardaydaasi heleen 9,4 dhibcood. Maaddada kale ee ay ardaydgu ku liiteen waxa ay ahayd maaddada xisaabta. Isku celcelin gabdhaha ayaa ka derajo sarraayay wiilasha. Waxaana soo baxday in dugsiyada gaarka loo leeyahay ay ka derajo sarreeyaan kuwa maamulka degmadu maamulo. Ugu danbayntii haayadda iskuulada ayaa daaha ka rogtay in ay jiraan laba shay oo qayb weyn ka qaata tayada waxbarashada ardayga, ayna labadaas shay yihiin, in ardaygu ku fiican yahay afka iswiidhishka iyo in waalidkiisu yihiin kuwo aqoon leh.